क्याम्पस नपाएपछि विश्वविद्यालय प्राङ्गणमा पढ्दै विद्यार्थी - Goraksha Online
बेलझुण्डी, ५ फागुन । विश्वभरका कुनै पनि विश्वविद्यालयका चिकित्साशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरु क्याम्पस नपाएको अवस्था छैन । विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा त चिकित्सा शास्त्र पढ्ने सबै विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्यरुपमा कलेज उपस्थित हुन आह्वान गरियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् वा काठमाडौं विश्वविद्यालयका चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु लकडाउनमा पनि कलेजमा पुगे । क्याम्पस भवनमै उनीहरुलाई प्रयोगात्मक अभ्याससँगै प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गराइयो । कोभिडका बिरामीलाई पनि यसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा पद्धति सिकाइयो, तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भने प्रदेश सरकारको अस्थायी कोरोना अस्पताल बनिरहँदा विद्यार्थीहरु फेरि नारावाजीमा उत्रिएका छन् ।
धेरै नागरिकहरुले होम आइसोलेसनमै बसेर उपचार गरिरहेका छन्, ताकि ती क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले आफ्नै क्याम्पसमा पठन–पाठन गर्न पाउन र प्रयोगात्मक अभ्यास पनि गर्न पाऊन् भनेर । तर प्रदेश सरकारले त नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई आफ्नै संपत्तिका रुपमा प्रयोग गरिरहेकोमा आफूहरुको आपत्ति रहेको विद्यार्थीहरुको भनाइ थियो ।
आइतवार अफिस समय अगावै उनीहरु कोरोना अस्थायी अस्पतालमा पुगेर फेरि पहिलेकै नारा दोहो¥याए, हाम्रो क्याम्पस हामीलाई दे, समयमै बिएएमएसको कोर्ष सकाऔ, हामीलाई विश्वविद्यालयको अभिभावकत्व चाहिन्छ, पैसा हामीले तिरेका छौं, नतिजाका लागि आतुर छौं । आइतवारको नारावाजीलाई अझै विश्वविद्यालयले आधिकारिकरुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
क्वारेन्टाइन राख्न र आइसोलेसन वार्ड बनाउने नाममा मुलुकको अरबौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि अस्वाभाविक रुपमा भाडा तिरेरै आइसोलेसन वार्डमा धेरै बजेट खर्च गरे । तर अब विश्व लकडाउनमुक्त भइरहँदा पनि बेलझुण्डीमा आयुर्वेद चिकित्सा पढ्ने विद्यार्थीहरुमाथि स्थानीय सरकारको पनि शून्य रेस्पोन्स भएको छ ।
‘हामीलाई हाम्रो कलेज चाहिएको मात्रै हो, हामी घरमै पढेर चिकित्सक बन्न सक्दैनौं, कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ हामीलाइ थाहा छ, तर पदाधिकारीहरु मौन बस्नु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो’, बिएएमएसका विद्यार्थी हेमराज पन्तले भने । उनी छैठौं व्याचका विद्यार्थी हुन् । उनलाई प्रयोगात्मक कक्षा मात्रै अब आवश्यक छ, तर उनीहरुलाई फेरि बिजौरीमा सार्ने अभ्यास भएपछि उनीसँगै आम विद्यार्थीहरुले बिजौरीमा पढ्न चाहेका छैनन् ।
किनकि बिजौरीमा अस्थायी कोठा बनाउनु भनेको फेरि पनि विद्यार्थीहरुलाइ अन्योलमा पार्नु मात्रै हो । प्रदेश सरकारका अस्पतालहरुलाई अनियमितताको आरोप पनि सार्वजनिक लेखा समितिले लगाइसकेको अवस्था छ । तर पनि अस्पतालले आधिकारिक खर्च विवरण देखाउन सकेका छैनन् । बिरामीलाई उपचार गर्नुको साटो अनियमितताका लागि मात्रै बेलझुण्डी कोरोना विशेष अस्पताल चल्न थालेका आम नागरिकहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल सरकारले तोकेको प्रादेशिक अस्पताल दाङ जिल्लामा तुलसीपुरको अस्पताल मात्रै हो । ५÷७ जना बिरामीलाई तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालको एउटै कोठामा व्यवस्थापन गर्न असहज छैन । तर पनि प्रदेश सरकार यो विषयमा किन बोलिरहेको छैन ? विद्यार्थीहरुको त्यही माग थियो आइतवारको आन्दोलनमा पनि । हामी एउटै मागमा आन्दोलन गरिरहेका छौं, तर न हाम्रा पदाधिकारीहरुले हाम्रो आवाज सुनिरहेका छन्, नत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले ।
अनलाइन कक्षाले मात्र चिकित्सक बन्नका लागि पर्याप्त छैन, यसका लागि भौतिक उपस्थितिबीचमै पढाइ शुरु गर्न पनि विद्यार्थीहरुले आग्रह गरेका छन् । सबै अनलाइन कक्षाबाट हुन्छ भने क्याम्पसका भौतिक संरचनाहरु किन बनाउनुपर्यो ? घरबाटै बिएएमएस पास गराइन्छ भने विद्यार्थीहरुले त्यहीअनुरुपको अपेक्षा गर्नुपर्ने हो, अन्यथा हामीलाई शुल्क तिरेअनुरुपको पाठ्यक्रम अनुरुपको पढाइ होस् भन्ने हो ।
विद्यार्थीका माग जायज : डिन पोख्रेल
विद्यार्थीहरुले क्याम्पस फिर्ता आन्दोलन गरिरहँदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डा. सञ्जय पोख्रेलले विद्यार्थीहरुका माग जायज भएको बताएका छन् । कम्तीमा एक बर्ष उनीहरुले अनलाइन कक्षामा थ्योरी अध्ययन गरे, तर अव उनीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि क्याम्पस भवन चाहिन्छ, हामीले पनि यो विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा प्रदेश सरकारका अधिकारीसँग कुरा गरिरहेका छौं’, डिन पोख्रेलले भने ।
कोभिड विशेष अस्पताललाई चाँडै अन्यत्र व्यवस्थापन गरी त्यहाँ बिएएमएसका विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन नियमित गर्न आफू पनि अत्यन्तै आतुर रहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
चिकित्सा शास्त्रमा अनलाइन पढाइ एउटा सेमेस्टरका लागि स्वाभाविक हुनसक्छ, तर फेरि पनि अनलाइनमै पढाइले विद्यार्थीहरुले प्रयोगात्मक कक्षा लिन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
प्रयोगशालाको प्रयोग तथा पुस्तकालयको प्रयोग पनि नरहेपछि विद्यार्थीहरु कसरी चिकित्सक बन्छन् भन्नेमै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यदि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले अझै पनि सो क्याम्पसलाई अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाउन खोजे भने त्यो सबै विश्वविद्यालयको तुलनामा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सिकाई पद्धतिमै प्रश्नचिन्ह खडा हुने पनि अभिभावकहरुको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्रीले भनेपछि मात्रै अस्पताल सर्छ : मेसु विनोद सिंह
यसैबीच तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालका मेसुसँगै कोरोना विशेष अस्पतालका सदस्य सचिव समेत रहेका डा. विनोद सिंहले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले भनेअनुसार हुने बताएका छन् । उनकै आग्रहमा बेलझुण्डीमा कोरोना विशेष अस्पताल राखिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिएपछि मात्रै अस्पताल हट्ने अडान दोहो¥याए ।
‘हामीलाई अन्तै अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुनै आदेश आएको छैन, आदेश नआउँदासम्म हामीले बेलझुण्डीमै कोरोना विशेष अस्पताल चलाउने हो’, मेसु सिंहले भने । यसैबीच विद्यार्थी प्रतिनिधि र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबीच पनि कोरोना अस्पतालको कहाँ व्यवस्थापन गर्ने र विद्यार्थीलाई कहाँ पढाइको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादव लामिछानेले यो विषयमा रजिष्टारले बोल्ने बताउँदै आफूले आधिकारिक अभिव्यक्ति दिन चाहेनन् । रजिष्टार माधव अधिकारीले फोन उठाए पनि आफू मिटिङमा रहेको भन्दै यो विषयमा पछि बोल्ने बताएका छन् ।
हिमाल बस्नेत आमन्त्रीत केन्द्रिय सदस्य